Akụkọ - nkwalite na njikọta nke ala ụlọ PVC nwere ike ịsọ mpi ahịa
Nkwalite zuru oke na ijikọ ala ụlọ PVC nwere ike bụrụ asọmpi ahịa
Ka ọ dị ugbu a, site na ịkwalite ihe ndị dị n'ala, ndị mmadụ ejedebeghị na taịlị ụlọ. Na mgbakwunye na ala, ala PVC ji nwayọọ nwayọọ na -egbo mkpa ndị na -azụ ahịa maka ahụike ikuku.
Nkwalite zuru oke nke ala PVC ka ọ banye n'ahịa
A na -akpọkwa ụlọ ala PVC "ihe dị ala dị larịị". Ọ banyere n'ahịa ndị China na mbido 1980. Ọ bụ ụdị ihe ịchọ mma ụlọ dị larịị nke na -ewu ewu na ụwa, ọkachasị na Europe, America na Asia, Japan na South Korea. N'oge a, site na mmepe nke ọha mmadụ, ahịa PVC na-egosikwa asọmpi asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ, ọkachasị n'okpuru nkwalite azụmahịa e-commerce, omume a na-agbasa n'ike n'ike, ụlọ nrụpụta ụlọ PVC ga-echekwa ọkwa dị mkpa nke mgbanwe.
N'oge a, ụlọ ọrụ PVC na -eche ọnọdụ dị oke mkpa nke nkwalite. Ịkwalite mmezi nhazi na inweta njikwa kpụ ọkụ n'ọnụ bụ isi ihe na -emepụta na mmepe nke ụlọ ọrụ PVC n'ala. Aghotara na agbanyeghị na ala ala PVC bụ ngwaahịa ọhụrụ, a na -achọsi ya ike n'ahịa mba ọzọ n'ihi ezigbo arụmọrụ ya na arụmọrụ ọnụ ahịa ya dị elu. Ozugbo ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị na -azụ ụlọ ghọtara uru nke ihe ọhụrụ a, ha ga -ebido ebili mmiri.
Dị ka akụkọ si kwuo, mgbe nnukwu njikọta nke ụlọ ọrụ ala ụlọ PVC, ụfọdụ ụlọ ọrụ ọhụrụ na nke nwere mmetụta apụtala, ụfọdụ ụlọ ọrụ azụ na-arapara n'ụdị ahịa ahịa ọdịnala ga-enwe mkpochapụ. Nke a bụkwa ọnọdụ a na -apụghị izere ezere nke mmepe nke oge a.
Ndị ọrụ nyocha ule rụtụrụ aka na ntụkwasị obi arụmọrụ nke ala plastik bụ "ndụ" nke ụdị ngwaahịa a. Site na nlele nhazi usoro, ekwesịrị ịkwalite ụfọdụ nyocha usoro iji melite arụmọrụ ngwaahịa. N'ụzọ dị otú a, ndụ ọrụ nke ala plastik ga -abawanye. Ogologo oge na -adigide.
Ala ụlọ PVC nwekwara ike were ụzọ ịme anwansị dị elu
Onye nta akụkọ ahụ hụrụ n'ahịa na ala ụlọ PVC ugbu a nwere ọtụtụ agba dị iche iche, mana ọtụtụ n'ime ha na -agbaso ụzọ ịme anwansị dị elu, gụnyere udiri kapeeti, nchara okwute, ihe eji eme ụlọ, wdg. na agba ndị ọgaranya na ọmarịcha. Ka ọ dị ugbu a, ndị kacha ewu ewu bụ n woodomi osisi osisi na n imomi ala mabul. Ederede osisi na -eitationomi nwere ederede mara mma na mmetụta ebumpụta ụwa na nke osisi. Ọrụ aka ndị a nụchara anụcha nwere ọbụna ihe ochie na ihe ebumpụta ụwa nke osisi osisi ochie; udiri marble nitationomi. O nwere udiri eke eke sitere n'okike nke okike eke, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezigbo ala osisi na mabul n'ihe metụtara mmetụta anya na mmetụta ụkwụ.
Tụkwasị na nke a, n'ihi na enwere ike ịbepu ihe PVC n'enweghị mma site na mma mma ịba uru, ọ na -agbaji njedebe nke ala nkịtị ma nwee ike iji agba dị iche iche wee fesaa ya, yabụ ndị mmadụ nwere ike nye egwuregwu ha ihe zuru oke ma zute onye ọ bụla. mkpa nke ụdị mma dị iche iche. , Iji nweta mmetụta ịchọ mma nke ala ndị ọzọ siri ike iru, site na ịcha na imepụta ihe ahaziri iche, oghere dị ndụ ga -adịwanye iche na nka.